Home Wararka AMISOM oo ku Eedeysay Dowladda Somaliya ee NN inay Shabaab la Shaqeeyaan...
AMISOM oo ku Eedeysay Dowladda Somaliya ee NN inay Shabaab la Shaqeeyaan oo qariyaan.
Iyadoo ay Xamar ka dhacayaan qaraxyo arxan darra ah ayaa waxay Amisom ku eedeysay in dowladda Somaliya ay la shaqeyso Shabaab qarraxyadana ay sii soconayaa, inata ay dowladda NN qarineyso Shababka. Taliye Xigeenak AMISOM, Mr Simon Malungo ayaa bartiisa twitter waxaa uu soo dhigay qoraal uu ku eedeyey dowladda Somaliya inay qariso Alshabaab, ilsa markaana ay khiyaantay AMISOM.
Eedeyntaan mugga weyn leh marka ay ka timaado mas’uul sare oo ku dhexjira hawlaha AMISOM, waxay u muuqataa inuu hayo caddeymo muujinaya waxa uu dowladda Somaliya ku eedeynayo. Mas’uul heerkaan oo kale iskama hadlo mana sheegi karo wax uusan caddeyn u hayn. Sidaas darted dowladda Somaliya waxaa laga rabaa inay eeddaan meel iska saarto.
Runtii waa caloolxumo muruga weyn leh in dowladda NN ay ka mas’uul tahay in Al shabaab ay kala shaqeeyaan, sida uu sheegay Mr. Malungo sidii shacbiga Somaliyeed gaar ahaan dadka reer Muqdisho loo layn lahaa, iyadoo aan loo eegin caruur, arday, haween, buke iyo baahane kii uudoono ha noqdee.
Dhinaca kale waxaa dalka jooga ciidan AMISOM ah oo gaaraya 20,000 kuwaas oo qaata mushaaro aad u badan oo dadka qaar ay ku sheegaan in askariga caadiga ah uu qaato$1150 bishii, halka askariga Somaliga ee ka horreeya marka la hawlgalayo uu qaato $100 ilaa $200, taas oo xanuun leh marka aad tahay ruux waddani ah ee aan koox iyo dowladdii joogtaa uu dalka kaala weyn yahay.
Ilaa iyo intii ay timid dowladdaan NN ma jirto hawlgal wanaagsan oo baahsan oo ay AMISOM gashay, sababtuna waa qorasha xumada dowladda Farmajo iyo qorashaha caqliyeysan ee ay AMISOM kaga foganeyso inay dagaal gasho.
Haddii Alshabaab laga guuleysto AMISOM waxay aaminsan tahay ama ogtahayba inaan loo baahaneyn sidaas darted lagama yaabo inay qaadaan hawl gallo lagu wiiqayo Al shabaab.
Haddaba waxay hadda u soo jeediyeen dowladda NN eedeyn caddeymaheeda ha u soo bandhigaan shacbiga Somaliyeed ee ay dhiiggooda ku naaxeen.
Lagama abaal ka dhacayo oo hawllo ayey qabteen markii ay joogtay dowladdii Xasan Sheekh Maxamuud oo waxaa loo sameyn jiray qorshooyin hawlgaleed oo lagu xorreeyey dhammaan magaalooyinka waaweyn ee Koofurta ku yaalla.
Balsa maanta waxay joogtaa faro isku fiiq fiiq. Marka aan ka soo qaadno in dhammaan ciidanka AMISOM ee joogaa Somaliya uu yahay 20,000 askari inkastoo la leeyahay waa 23,000 oo aan mushaarkooda ka cabirno askarta hoose oo kaliya walow saraakiisaha ay qaataan mushaar aad uga badan intaas ayaa waxay qaadanayaa bishii 20,000 X $1150= $23,000,000. Waa seddex iyo labaatan milyan bishii. Lacagtaas oo haddii seddex marka loo dhigo dhig kaliya ciidanka Somaliya la siin lahaa aan Alshabaab maalmo la arki lahaa iyagoo orod uga gudba xuduudaha ama raxan raxan isu soo dhiiba.
Isku soo Taliye xigeenka AMISOM Mr. Simon Malungo waxaa laga rabaa caddeynta hadalkaan hoose iyadoo dowladda NN laga rabo inay meel saarto eeddaan.